Platinum HideIP 3.1.2.6 | မြန်မာအိုင်တီနန်းတော်
Platinum HideIP 3.1.2.6
by blackr00ter in Application Tags: Hide-IP
2. Copy the crack “PlatinumHideIP.exe” to prog dir,i.e.”C:\_Program Files\_PlatinumHideIP\_” , and replace the original.
Previous Granma-Love Next SwishMax Version 4
သင့်ကိုယ်ပိုင် Ning Site တွင်စာသားများကိုပြေးအောင်လုပ်နည်း.။
သီချင်း..ရေဒီယို အားကိုယ်ပိုင် Ning Site တွင်ထည့်သွင်းခြင်း
Software မပါဘဲ Folder Lock ချနည်းလေးပါ။
Mouse မရှိတဲ့ အခါ Mouse အသုံးပြုသလိုမျိုး ကီးဘုတ်ကနေသုံးလို. ရတဲ့နည်းပါ။
မသိသေးသူများအားဖော်ပြလိုခြင်းနှင့် မသိသည်ကိုသိအောင်ဖော်ပြလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှဘလော့များကူယူဖော်ပြလိုလျှင်တော့ ကျွန်တော့်ဘလော့ကိုပြန်ညွှန်းပေးဖို့ တော့ခွင့်ပန်ပါရပါစေ ကျွန်တော်လဲဘလော့ များကို တခြားဆိုဒ်များမှဘလော့များအား ပြန်လည်ပြုပြင်ထားပါသည်။မသိသည်များရှိ လျှင်ဖြစ်ဖြစ် ဆိုဒ်အတွက် အကူအညီပေးလိုလျှင် softwaremyotaw@gmail.com ကိုအပ်ပြီးတော့ အကူအညီများပေးနိုင်ပါပြီ။ ဤ ဆိုဒ်အာ3းရက် 12 လ ပိုင်း 2012 ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့သည်။
ဘလော့ပို့စ် နှင့် စာမျက်နှာများ